U-Januwari 22, 2019 osebenzayo | Izinguqulo ezifakwe kwingobo yomlando | Landa i-PDF
Imininingwane owabelana ngayo
Lawula ukuthi ubani owabelana naye ngolwazi nge-akhawunti yakho ku-Google+.
Iya kokuthi Ulwazi Owabelana Ngalo
Uma ungene ngemvume futhi usebenzisana namanye amasevisi e-Google, njengokushiya amazwana kuvidiyo ye-YouTube noma ukubuyekeza igoma ku-Google Play, igama lakho nesithombe kubonakala eceleni komsebenzi wakho. Futhi singabonisa lolu lwazi kuzikhangiso kuye ngesilungiselelo sakho sezincomo ezabiwe.
Uma ungumfundi noma usebenzela inhlangano esebenzisa amasevisi e-Google (njenge-G Suite), umlawuli wesizinda wakho nabathengisi kabusha abaphatha i-akhawunti yakho bazothola ukufinyelela ku-akhawunti yakho ye-Google. Bangakwazi:
Kwezinye izimo, sibuyisela idatha ngezikhathi ezikhawulelwe uma idinga ukugcinelwa izinhloso zebhizinisi ezifanelekile noma ezisemthethweni. Ungafunda mayelana nezikhathi zokubuyiswa kwedatha ye-Google, kufaka phakathi ukuthi ithatha isikhathi esingakanani ukususa ulwazi lwakho.
Sizama ukuqinisekisa ukuthi amasevisi ethu avikela ulwazi kusuka ekususweni ngengozi noma okungalungile. Ngenxa yalokhu, kungenzeka kube nokubambezeleka phakathi kwesikhathi osusa ngaso okuthile nesikhathi lapho amakhophi asuswa kumasistimu ethu esipele.
Sinakekela amaseva emhlabeni futhi ulwazi lwakho lungacubungulwa kumaseva angaphandle kwezwe lapho uhlala khona. Imithetho yokuvikelwa kwedatha iyahluka phakathi kwamazwe, ngenkathi amanye anikeza ukuvikela okuningi kunamanye. Ngokunganani ukuthi ulwazi lwakho lucubungulwa kuphi, sifaka ukuvikela okufanayo okuchazwe kule nqubomgomo. Futhi sihambisana nemithetho ethile esemthethweni ephathelene nokudluliselwa kwedatha, njenge-EU-US and Swiss-US Privacy Shield Frameworks.
Isibonelo, singafihla idatha yakho, noma sibethele idatha ukuqinisekisa ukuthi ayikwazi ukuxhunywa kolunye ulwazi olumayelana nawe. Funda kabanzi
Ukwenza ngezifiso amasevisi ethu
Isibonelo, singabonisa i-Google Doodle ekhasini lasekhaya losesho ukubungaza umcimbi oqondiswe ezweni lakho.
Amakhukhi nobuchwepheshe obufanayo
Shintsha ulimi: AfrikaansBahasa IndonesiaBahasa MelayuCatalàČeštinaDanskDeutschEestiEnglishEnglish (United Kingdom)EspañolEspañol (Latinoamérica)EuskaraFilipinoFrançaisFrançais (Canada)GalegoHrvatskiIsizuluÍslenskaItalianoKiswahiliLatviešuLietuviųMagyarNederlandsNorskPolskiPortuguês (Brasil)Português (Portugal)RomânăSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenskaTiếng ViệtTürkçeΕλληνικάБългарскиРусскийСрпскиУкраїнська‫עברית‬‫اردو‬‫العربية‬‫فارسی‬አማርኛमराठीहिन्दीবাংলাગુજરાતીதமிழ்తెలుగుಕನ್ನಡമലയാളംไทย한국어中文 (香港)中文（简体中文）中文（繁體中文）日本語